यसरी हेरिन्छ साथी हो ! MLTR को कन्सर्ट « paniphoto
« तस्विर हेर्नुहोस् भावना पोख्नुहोस् बिहे गरुम्, सुनका चै कुरै नगरुम् »	यसरी हेरिन्छ साथी हो ! MLTR को कन्सर्ट
By -पानीफोटो- on Thursday November 17, 2011	-प्रल्हाद अधिकारी-बाँचिराख्नु पर्छ जे पनि देख्न पाईन्छ भन्थे बुढापाकाहरु, साँच्चै नै हो रहेछ । हाम्रो जस्तो कम आय भएका मानिसहरुको बाहुल्यता भएको मुलुकमा त्यती टाढाबाट गीत गाएर कमाउँन आउँनु आफैमा आश्चर्य हो । पहिले ब्रायन एडम्स नेपाल गीत गाउँन आउँछन् रे भनेको सुन्दा त विश्वासै थिएन । लाग्थ्यो, त्यस्ता हिट गायक, करोडौँ डलर कमाउँने, नेपाल आएर कति लग्नु र आउँनु । तर खुद ब्रायन एडम्स आएर गीत गाएर गए । मेरो केही लागेन । सपना झै मानेर पत्याएँ । मैले गाएको भाषा नबुझे पनि सुन्दै आएको अर्को ब्यान्ड एमएलटिआर पनि हिजैमात्र नेपाल आईसकेछ । त्यती ठुला गायकहरु नेपाल आउँनु त नेपालका लागि कति ठुलो कुरा हो भनिरहनु नपर्ला । हेर्नु नै भयो होला नि, ब्रायन एडम्स आउँदा पत्रपत्रिकामा के के लेखेका थिए । ब्रायन आए, ‘अब संसारलाई नेपालले चिन्छ ।’ ‘पर्यटन बर्ष सफल हुने छाँट आयो ।’ ‘नेपाली संगीत उद्योगले नयाँ फड्को मार्‍यो ।’ अब ब्रायन आएकै कारणले नेपाललाई संसारमा कतिले चिने ? पर्यटनबर्षको सफलता कस्तो भयो ? संगीत उद्योगले कति फड्को मार्‍यो ? यो त तिनै पत्रिकाले लेखाजोखा राखेका होलान् । मलाई भने यस्ता कुराको लेखाजोखा राख्नु छैन । मेरो लागि दुवै पाहुना बराबर । अस्तिको पाला ब्रायन एडम्स आउँदा त विशेष कारणले हेर्न पाईएन । यो पाला चै एमएलटिआरलाई हेर्न छुटाईदैन । मैले ब्रायनको कन्सर्ट नहेर्नु र एमएलटिआरको कन्सर्ट हेर्नुमा भने कारण यस्तो छ
ब्रायनको कन्सर्ट दशरथ रगंशालामा गरिएको थियो । रंगशालामा वरिपरी पर्खाल कहीबाट चियाउँदा पनि मरे नदेखिने । देख्नलाई भित्रै पस्नु पर्ने । भित्र छिर्ने रकम भनि साध्यै नहुने । मुख्य कुरा ब्रायनको कन्सर्टले पैसा हुने र नहुनेलाई छुट्याईदियो । यसैले त्यही विभेदको बिरोध स्वरुप ब्रायनको कन्सर्ट हेर्न गइएन । तर एमएलटिआरको कन्सर्टको कुरै बेग्लै । यसपालीको कन्सर्ट अस्तिकोमा जस्तो १५ लाख भाडा तिरेको ठाउँमा छैन । प्रशासनले सित्तैमा मिलाईदिएको टुडिखेलमा छ । फेरि यो कन्सर्टमा पैसा हुने र नहुनेलाई छुट्याईएको पनि छैन । १० हजार र ४ हजार तिर्नेलाई केही बिशेष सुविधा पक्कै छ । तिनले मञ्च नजिकै बसेर हेर्न पाउँलान् । तर २५ सय, १५ तिर्नेले टुडिखेलको छेउपट्टि मञ्चबाट निकै टाढा त उभिन पाउँने हुन् । त्यति टाढाबाट मन्च त अलि हाइटमा बनाउने भएकोले जसोतसो देख्लान् टाउकैटाउकाले छेलिए पनि। गाउने भने कमिला जत्रो नै देख्ने हो । ठूला पर्दा हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ उनीहरुले । तिनीहरुले जति त म टुडिखेल छेउको आकाशे पुलबाटै देख्न पाईहाल्छु नि । यसैले गईन्छ यसपालीको एमएलटिआरको कन्सर्ट हेर्न । बरु छिट्टै जानु पर्ला, फेरि छिट्टै आकाशे पुल हाउसफुल हुने हो कि ।
यस्तो देखिन्छ आकाशे पुलबाट टुडिखेल ।
« तस्विर हेर्नुहोस् भावना पोख्नुहोस् बिहे गरुम्, सुनका चै कुरै नगरुम् »	10 comments to यसरी हेरिन्छ साथी हो ! MLTR को कन्सर्ट
· जवाफ दिनुहोस्	गजपको आइडिया । मलाई पनि ठाउँ रोक्दै गरौं है, आकाशे पुलमा ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	प्रमोद दवाडी
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	पवित्रा बिमली
· जवाफ दिनुहोस्	नेपालमा पनि संगीतका लागि १० हजार सम्म खर्च गर्ने मानिसहरु निस्कन थालेकोमा नेपालका संगीत कर्मीलाई बधाई छ । यसको फाईदा उठाउँन सक्नु पर्छ कलाकारहरुले ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Namita
· जवाफ दिनुहोस्	आम्मामा टिकट पनि कति महगों । ६ महिनाको कार्यक्रम हो कि क्या हो । नेपालका पैसा विदेश पठाउँने राम्रो तरिका निकाले केटाहरुले । यस्ता कार्यक्रम रोक्नु पर्छ ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Bikram
· जवाफ दिनुहोस्	o my sleeping child, the world so wild but you built your own paradise….Great to listen in Nepal
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	shekhar khadka
· जवाफ दिनुहोस्	j vaya pane nepali kam chainan….ajja metallica, pantera aaya vane ta ma….ghar ko computer, mobile, ipod sabai bechera janchu concert herna…
यही Category बाटर पनि, फागुमा असाध्यै रमाइलो हुन्थ्योआधुनिक आँखामा कृष्ण लिलाममीको ‘अचुक अस्त्र’ले म यसरी धेरै समय तह लागेपहिलो भ्यालेन्टाइन्स डे – संस्मरणविजया दशमीको शुभकामना !!!कुन देशमा कति बजे छ टिकाको साइत ?दशैं र मासुनर्बेमा मध्यरातमा घाम ?जादुगर सर – संस्मरणबुद्ध जयन्ति, मेरो वाइफाइ र तिनको सामान्य ज्ञानOnline Users7 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार